अन्तर्राष्ट्रिय खोप प्रमाणपत्र के हो? | यात्रा समाचार
तपाईको यात्राको कारण जेसुकै होस्, हाम्रो स्वास्थ्यको देखभाल गर्न उपायहरू सधैं नै लिनुपर्दछ। विशेष गरी जब विदेशमा केहि विदेशी ठाउँमा यात्रा गर्नुहुन्छ। तलको पोष्टमा हामी अन्तरराष्ट्रिय खोप प्रमाणपत्र के हो भनेर प्रतिध्वनित गर्दछ, यात्रुका लागि जोखिम कारक के हुन्, उनीहरूलाई कति दिन अगाडि राख्नुपर्दछ वा संक्रामक रोगहरू जोखिममा छन्?, अन्य मुद्दाहरूको माझमा।
1 अन्तर्राष्ट्रिय खोप प्रमाणपत्र के हो?
2 यात्राको क्रममा
3 मैले कुन खोपहरू यात्रा गर्नु पर्छ?
4 तिनीहरूलाई कति अगाडि राख्नु पर्छ?
5 स्पेनमा कति खोप केन्द्रहरू छन्?
6 यात्रीका लागि जोखिम तत्वहरू के हुन्?
7 जोखिम अनुसार यात्रुहरूको वर्गीकरण
8 जोखिममा संक्रामक रोगहरू के हुन्?
9 स्वास्थ्यमा लाज नमान्नुहोस्
अक्सर अन्तर्राष्ट्रिय खोप कार्डको रूपमा पनि चिनिन्छ, यो प्रमाणपत्र हाम्रो देश बाहिर यात्रा गर्न एक आवश्यक कागजात हो जुन प्रमाणित गर्छ कि हामीले डब्ल्यूएचओद्वारा अनुमोदित खोपहरूको एक श्रृंखला प्राप्त गर्यौं। (विश्व स्वास्थ्य संगठन) हाम्रो देशको स्वास्थ्य अधिकारीहरु द्वारा अधिकृत एक अन्तर्राष्ट्रिय खोप केन्द्र मा।
अन्तर्राष्ट्रिय खोप प्रमाणपत्रको वैधता अवधि १० बर्षे खोप लगाए पछि दसौं दिनमा गणना हुन्छ। र यसको सामान्य उद्देश्य खोप कार्डको जस्तै उद्देश्य छ: हामीलाई दिइएका खोपहरू रेकर्ड गर्न। यसका लागि प्रमाणपत्रमा समावेश जानकारी धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध छ, प्राय: स्प्यानिश, फ्रान्सेली र अंग्रेजीमा, ताकि यसले डाक्टर वा अध्यागमन एजेन्टहरूलाई बुझ्न सकीन्छ बिरामीको नागरिकतालाई परवाह नगरी। स्पेनिश अन्तर्राष्ट्रिय खोप प्रमाणपत्रमा पनि यात्रुहरूको लागि केही जानकारी छ।
छवि | महिला र यात्री
धेरै गन्तव्यहरूमा, खोप प्रमाणपत्र देश प्रवेश गर्न आवश्यक हुन सक्छ, त्यसैले यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन कानूनीमा पनि यात्रा सुरु गर्नका लागि आवश्यक कागजात हो।
उदाहरण को लागी, केहि स्थानहरु मा, पहेलो ज्वरो को लागी रोगहरु को लागी अन्तर्राष्ट्रिय खोप प्रमाणपत्र प्रस्तुत नगरेको अर्थ अधिकारीहरु हामीलाई पारित गर्न अनुमति छैन भन्ने हुन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय खोप प्रमाणपत्र आवश्यक हुनेछ यदि, उदाहरणका लागि, यात्राको क्रममा हामी दुर्घटनामा पर्दछौं। कल्पना गर्नुहोस् कि हामीलाई बाँदर वा मुसाले टोकेको छ, हामीलाई उपचार गर्ने डाक्टरले हामीसँग रेबीज खोप छ कि छैन भनेर जान्नु आवश्यक छ र यदि हो भने, कति डोज हालसम्म दिइयो।
मैले कुन खोपहरू यात्रा गर्नु पर्छ?
जब हामी एउटा विदेशी ठाउँमा यात्राको तयारी गरिरहेका छौं, शंकाले हामीलाई सहयोग पुर्‍याउँछ, मलाई कुन खोप चाहिन्छ? कुनचाहिँ अनिवार्य छन्? उनीहरूलाई समाधान गर्ने उत्तम उपाय भनेको तपाईंको देशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइट प्रयोग गर्नु हो र तपाईंको परिवार चिकित्सकलाई खोज्नुहोस् वा सल्लाह लिनु हो।
तिनीहरूलाई कति अगाडि राख्नु पर्छ?
Vacc वा weeks हप्ता अगाडि खोपहरू योजना गर्नु उत्तम हुन्छ किनकि त्यहाँ पनि खोपहरू छन् जसलाई पछिल्लो बूस्टर चाहिन्छ।
स्पेनमा कति खोप केन्द्रहरू छन्?
स्पेनमा त्यहाँ १०१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय खोप केन्द्रहरू छन्, जसमध्ये २ सार्वजनिक प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवामा रहेका छन् र बाँकी 101२ अन्य प्रशासनका हुन्। तिनीहरू सबै कार्य मंत्रालयमा कार्य गर्दछन्।
यात्रीका लागि जोखिम तत्वहरू के हुन्?
यात्राको गन्तव्य: चिकित्सा सेवाको गुणवत्ता, पानी, आवास, स्वच्छता ...
यात्राको अवधि: ब्याक्टेरिया र संक्रमणको प्रभावमा पर्न सक्ने सम्भाव्यता निर्धारित गर्दछ र निश्चित खोपहरूको आवश्यकतालाई प्रभाव पार्दछ।
भ्रमणको उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रले पर्यटन वा व्यवसाय अनुकूलित क्षेत्रहरू भन्दा बढी जोखिम लिन्छ।
जोखिम अनुसार यात्रुहरूको वर्गीकरण
अधिकतम जोखिम: दीर्घकालीन यात्राहरू वा व्यक्तिगत यात्राहरू अनिश्चित अवस्थामा।
मध्यम जोखिम: १- 1-3 हप्ताको यात्रा, मुख्यतया सहरहरूमा तर ग्रामीण इलाकाको सहरको साथ, यद्यपि होटेल बाहिर निदाइ र अनिश्चित अवस्थामा रहित बिना।
न्यूनतम जोखिम: ठूला शहरहरूमा व्यापार यात्रा।
जोखिममा संक्रामक रोगहरू के हुन्?
खाना र पानीबाट सार्ने रोगहरू: हैजा, हेपेटाइटिस ए र ई र टाइफाइड ज्वरो।
भेक्टरले सार्ने रोगहरू: मलेरिया वा मलेरिया, पहेलो ज्वरो र डेंगू।
जनावरहरू द्वारा सार्ने रोगहरू: रेबीज र भाइरल हेमोर्याजिक फियवर्स।
यौनजन्य रोगहरू: हेपेटाइटिस बी, एचआईभी / एड्स, सिफलिस।
वायुजनित रोगहरू: फ्लू र क्षयरोग।
माटोले सार्ने रोगहरू: टिटानस।
स्वास्थ्यमा लाज नमान्नुहोस्
विदेशमा, यात्रुहरूका लागि निजी अस्पतालहरूमा मात्र चिकित्सा सहयोग गर्नु सामान्य छ, जुन धेरै महँगो हुन्छ। ती क्षेत्रमा जहाँ स्वास्थ्य सेवा अभाव वा पहुँचयोग्य छैन, यो दुर्घटना वा बिरामीको स्थितिमा बिरामीलाई स्वदेश फिर्ता लिन आवश्यक पर्दछ, साथै मृत्यु भएमा पनि।
त्यसकारण, स्वास्थ्यलाई नछोड्नु र उच्चतम सम्भावित कभरेजको साथ चिकित्सा बीमा लिनुका साथै पारस्परिक सम्झौताको बारेमा जानकारी अनुरोध गर्न सल्लाह दिइन्छ। त्यो गन्तव्य र निवासको देशमा स्वास्थ्य मामिलाहरूमा अवस्थित छ
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » अन्तर्राष्ट्रिय खोप प्रमाणपत्र के हो?